Nanjary tafiditra bebe kokoa i Adobe ary manavao ny Premiere Pro sy After Effects | Famoronana an-tserasera
Adobe dia manavao ny Premiere Pro sy After Effects, ao anatin'izany ny terminologie mba hampidirana azy
Ny fampidiran-dresaka dia iray amin'ireo teny tamin'ny fotoana nanohina antsika sy Adobe dia nanambara fa hanavao ny terminology ho an'ny Premiere Pro, After Effects and Audition hanehoana ny fahavononanao hanolotra fitaovana tafiditra ho an'ny mpampiasa rehetra.
Vaovao mahafinaritra izay mampiseho ny lafiny iza amin'ny Adobe; ankoatry ny inona Nanavao ireo rindranasa roa ireo tamin'ny vaovao fa izahay dia hisaintsaina eto ambany mba tsy hanadinoanao ny iray amin'izy ireo.
ny endri-javatra vaovao an'ny Premiere Pro izay tonga nandritra ity volana Janoary ity Izy ireo dia mpanohana ny timecode ho an'ny tahan'ny endriny rehetra, ary midika izany fa afaka milalao amin'ny tahan'ny frame avy amin'ny 120fps, 240fps na VFR.
Nohatsaraina koa ny sehatr'asa ka na ny curve Gamma aza dia miova avokoa ny fisie RED. Toy ny tsy maintsy manisa fanatsarana fahombiazan'ny H.264 / HEVC encoding ho an'ny chips Intel TigerLake izahay.
Amin'izay mba Ho an'ny Adobe After Effects dia misy fanamboarana jiro vaovao ao amin'ny Content-Aware Fill ary izay manampy amin'ny fanafoanana ireo zavatra amin'ny filaharana izay fanovana tampoka ny jiro no vokarina. Ny iray hafa voalohany ho an'ny Effects dia ny fiovana eo amin'ny habaka gamma sy ny loko hanovana ireo rakitra RED toy ny ao amin'ny Premiere Pro.
Una andiana zava-baovao izay mampitombo ny traikefan'ny mpampiasa ary mandritra ny taona dia mihatsara ny suite Adobe. Vao herinandro lasa izay dia nampahafantatra anao an'izany izahay fironana ho an'ny audio Adobe amin'ity taona 2021 ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe dia manavao ny Premiere Pro sy After Effects, ao anatin'izany ny terminologie mba hampidirana azy
Inona ny VSCO